Bajaajtu waa shaqo abuurka dhalinyarada (Maqaal) - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Bajaajtu waa shaqo abuurka dhalinyarada (Maqaal)
Bajaajtu waa shaqo abuurka dhalinyarada (Maqaal)
September 19, 2017 admin446
Bajaaj waa mooto saddex lugooley ah oo aad looga isticmaalo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale dalka ah, wadda kasta ee Muqdisho waxa aad ku arkaysaa xeyn Bajaaj ah oo sida rakaab, inta badan dhalinyarada ayaa u badan dadka ku shaqeysta Bajaajta, waxaana qiyaastii Muqdisho ka shaqeya in ka badan 15,000 Bajaaj, sida aan ka dheehday lambarka ruqsadda ku qoran oo kor u dhaafay tiradaas.
Dhalinyarada ku shaqeysta Bajaajta ayaa u qeybsan labada kooxood, qeyb iyagu iska leh, iyo qeyb soo kireystay oo dadka kale ugu shaqeeya. Tusaale qofka isagu iska leh Bajaajta wuxuu ka faa’iido badan yahay, kan kireystay. Badrooniyaasha leh Bajaajta ayaa dhalinta uga kireeya 10 dollar, waana gaadiid aan shidaal badan u baahneyn. sidoo kale halkii Bajaaj ayaa dowladda hoose ee Xamar ku canshuurtaa 18 dollar bishii. Taas oo ka dhigaysa in ay dhaqaalaha kasoo xarooda ay kawada faa’iideystaan dowlad iyo shacabba.
Dadweynaha ayaa ku nastay Bajaajta, iyagoo si sahlan ku gaara meeshii ay doonaan, waqti kooban, wali ku darso Bajaajtu waxay shaqeysaa 24 saac, taas oo ka dhigaysa in aad xilli kasta heli kartid Bajaaj ku geysa goobtii aad dooneysid, dhanka kale Dadweynaha aan kireysan karin Taksiga ay door bida inay mootada raacaan, taas oo suuqa ka saartay Takaasidii ka shaqeyn jirtay Magaalada. arinta xusidda mudan ayaa ah in in bajaajta ugu yaraan ay biil ka helaan laba qoys, waana mashruuca ugu badan oo ay dadku hadda maalgashtaan.
Inkastoo ay dhalinyarada Bajaajta wada oo xirfadda darwalnimadu ku yar tahay ay sababaan shilal geysta dhimasho iyo dhaawac, dhanka kale Bajaajleyda ayaa cariiri kala kulma ciidamada, waxaana mudan in la xuso in dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay sara u qaaday ganacsiga iyo fududeynta socodka dadweynaha. shaqa abuurka Bajaajta ayaa ka dhaqangashay magaalooyinka waaweyn dalkeena Soomaaliya.
Tagged Bajaaj bajaajta mooto muqdisho xamar
Donald Trump”Waxaan hormuud ka noqonayna garab istaaga Soomaaliya”
Muqdisho: Booliska oo qabtay gaari siday Hilib qurmay